Imidlalo yebesifazane 2015. Izindlela zangempela ezemidlalo yezemidlalo yabesifazane 2015, isithombe.
Ukudlala kwezemidlalo sekuyisikhathi eside sekuyisiqondiso esizimele futhi esinamandla embonini yemfashini. Muva nje, ukuklama kwayo kuye kwalahlekelwa izici zayo "zobuchwepheshe". Ukubukeka okwesitayela kuyinto ebaluleke kakhulu kunezici zobuchwepheshe. Manje akunakwenzeka nje ukuthi usugibele noma ugijime nxazonke enkundleni, kodwa futhi ukuhamba uphumule nabangani. Akuyona into yokuthi ngisho nemikhiqizo edume kakhulu ikhiqiza imigqa ebizwa ngokuthi i-diffusion lines, efanelana nemidlalo, nokudaywa kwansuku zonke. Mayelana nokuthi izembatho zezemidlalo nezicathulo zabesifazane zizofakeka kanjani ngo-2015 futhi kuzoxoxwa kabanzi.
Imidlalo yokuzijabulisa yabesifazane 2015
Ama-tracksuits avela ku-plashevki ezinqabeni ezimbili kakade isikhathi eside esikhathini esidlule. Bashintshwa izinto eziphathekayo nezokunethezeka zemidlalo, ezisebenzayo nezifanelekayo. Ikakhulukazi, imfashini ngo-2015 kuyoba izitshudeni zemidlalo ezenziwe ngekotini, i-velvet, ama-knitwear. Ngaphezu kwalokho, i-suitable yezemidlalo yezemidlalo yama-2015 ayidingi ukuba ihlanganise amabhulukwe nama-sweaters avamile. Isibonelo, izinkomba zokubukeka kakhulu nezesimanje ze-leggings nama-hoodies.
Ngendlela, ngonyaka wezi-2015 phakathi kwamamodeli ezemidlalo ezithakazelisayo kakhulu kuzoba yi-leggings. Akulungele ukuqeqeshwa ezakhiweni zezemidlalo, nokugijima emgwaqweni. Kulo nyaka, abaklami bakhetha ukucaphuna okukhanyayo nemibala enemibala yale midlalo yezemidlalo. Ngakho-ke, awukwazi ukuzikhawulela kumabhulogi amnyama namagrey ahlabayo futhi unesibindi ukuthenga leggings engavamile ngebala "gay". Eqinisweni kuyoba yikho, kokubili onobude obude, ne-leggings enobude obuyi-3/4.
Uma ungathandi amatshe, bese ukhetha ibhulukwe lezemidlalo. Ukuqapha okukhethekile kufanele kuhokhwe kumamodeli nge-band elastic ekhanda. Amabhulukwe anjalo azoba mandla emlenzeni wakho futhi angakwenyuka ngesikhathi sokuzivocavoca. Amantombazane angamahle futhi ahlakaniphile wezemidlalo angakhetha ngokuphepha ngokusheshisa. Kulo nyaka, kuzodingeka kube khona amamodeli amafushane afanelekayo kanye nezifinyezo ezinkulu.
Ukufika kusesikhathini ngo-2015 kuzohlala T-shirts ezimbili. Imfashini izoba amashirts ezemidlalo we-shades ehlukile, okuyisisusa esihle kakhulu. Kulo mkhuba kanye nama-T-shirts ngama-prints, izithombe zezilwane kanye nemibhalo eqoshiwe nje. Zonke lezi zindlela zombala zizoba isici sezingubo zezemidlalo neziqongqo.
Ungakhohlwa ngama-hoodies ezemidlalo ezithakazelisayo nokudubula kwe-swiss. Akumane angenakuqhathaniswa nokudlala imidlalo emgwaqweni. Ngendlela, awukwazi ukuwagqoka hhayi kuphela emhlabathini wezemidlalo, ngoba uphelele impilo yansuku zonke.
Izicathulo zezemidlalo zesifazane zezemidlalo 2015
Ngokuqondene nezicathulo zezemidlalo, abaholi ngo-2015 bazohlala beqhuba izicathulo. Okuyiqiniso kuyoba njengamamodeli anemifanekiso emihle kanye nemicu ekhanyayo yembala engacatshangelwayo, futhi ejwayele nakakhulu ama-sneakers we-monophonic. I-Keds nayo isendleleni. Yiqiniso, ziqhubeka ziba izicathulo ezivamile. Ukushaya kuka-2015 kuzoba izicathulo zezemidlalo ezinemibala egqamile - obomvu, obomvu, ophuzi, o-orange kanye ne-violet, kanye namamodeli anezithombe ezintathu-ntathu nemibala emibala.
Ungashiyi abaklami ngaphandle kokunakekelwa nokuma kwezicathulo zezemidlalo. Ngonyaka ka-2015, qhubekani nomkhuba wemfashini wezinhlanhla ezizayo nezingajwayelekile zokusebenzisa izicathulo nezibhamu. Abakhiqizi ikakhulukazi bazama ukuma kwedwa, beka ukubonakala okungavamile okwakungabonakali ekusebenzeni nasekuthuthukisweni kwezicathulo ngokwabo.
Senza i-hairstyle yokugcina yokuhleka kwezinwele eziphakathi
Isitayela sokuvuna esimweni samanje
Uhlobo lwesithombe "Apple"
Isobho se-mushroom ne-pearl ibhali
Indlela yokukhipha ama-pores ahlisiwe ebusweni
Indlela yokuzola izinzwa zakho ngomzuzu owodwa
I-Mesotherapy ebusweni - iyini le nqubo? Ihluke kanjani ku-biorevitalization?
Indlela yokuqeda ukuvuvukala ngesikhathi sokukhulelwa
I-milk cocktail banana
I-ravioli ne-ricotta ne-Parmesan
Indlela yokusebenzisa ukugeza kwelanga